Kedu ka foil Aluminom n'azụ radiator si egbochi okpomọkụ? – Wikipedikia Encyclopedia?
Kedu ka ihe mkpuchi aluminom n'azụ radiator si egbochi okpomọkụ?
Tin ọ na-apụ n'azụ gị igwe okpomọkụ ahụ tie oyi? Ọlaọcha foil debere ala azụ nke a igwe okpomọkụ ahụ ga-atụgharị uche okpomọkụ laghachi n'ime ụlọ kama ikwe ka ọ gbapụ n'enweghị isi na mgbidi nke ụlọ.
N'otu aka ahụ, gịnị kpatara radiators m anaghị ekpo oke ọkụ?
2. Lelee maka tọrọ atọ Ikuku na igba obara Gị Igwe ọkụ. Ọ bụrụ na naanị otu (ma ọ bụ ole na ole) nke gị radiators adịghị kpo oku, ihe kachasị kpatara nke a bụ ikuku tọrọ atọ. Ọ bụrụ na ị gbanwere kpo oku azụ n'oge ọkọchị, ikuku nwere ike ịdaba na nke gị radiators, na-eme ka ha bụrụ ọkụ na ala mana oyi di n’elu.
Ọzọkwa, shelf radiator na-akwụsị okpomọkụ?
A shelf radiator (ee, a adị)
A shelf radiator dị n'elu a igwe okpomọkụ ahụ na-enyere aka ịtụba okpomọkụ gaa n'ihu site na igwe okpomọkụ ahụ banye n'ime ụlọ, kama ikwe ka ọ rịgoro n'uko ụlọ.
Gini mere igwe radiators anaghị ekpo ọkụ?
Kedu ka m ga-esi zoo radiator m?
Kedu ihe ị na-etinye n'azụ radiator?
Kedu ihe kpatara foil aluminum ji enwe akụkụ na-egbuke egbuke ma na-egbuke egbuke?
Ọ dị mma idebe arịa ụlọ n'ihu radiator?
Aluminom foil ọ na-egosipụta okpomọkụ?
Gịnị kpatara ụfọdụ radiators ji ekpo ọkụ karịa ndị ọzọ?
Kedu ka esi eme ka arụmọrụ radiator dịkwuo elu?
Kedu akụkụ nke foil kwesịrị ikpo ọkụ?
Kedu ihe bụ radiator booster?
Kedu ihe kpatara radiators dị nso na windo?
Ime radiator na-ekpuchi ikpo ọkụ?
Ime radiator na-akwụsị okpomọkụ?
Kedu ka m ga-esi nweta ọkụ karịa na radiator m?
Kedu okpomọkụ nke foil foil na-egosipụta?
Foil ọ na-egosipụta okpomọkụ?
Gịnị bụ ihe kasị mma okpomọkụ ngosiputa?
Kwadoro radiators na mgbidi mpụta?
Kedu ka foil tin si ebelata okpomọkụ?
Kedu ka foil aluminum si egosipụta okpomọkụ?
Gịnị bụ ihe kasị mma okpomọkụ retaining ihe onwunwe?
Kedu ka ị si egosipụta okpomọkụ?
Gịnị mere Mylar ji na-egbuke egbuke?
Kedu ihe kpatara ha ji etinye radiators n'okpuru windo?
Kedu akụkụ nke mpempe akwụkwọ aluminom na-egosipụta okpomọkụ?
Wepụ Igwe Igwe Igwe Gị Site na Anya Gaa na Ọrụ nke Nkà
Kpuchie ya. Easyzọ dị mfe (na nke ọdịnala) iji zoo radiator na-adịghị mma bụ ihe mkpuchi radiator.
Tee ya. Uwe mkpuchi ọhụrụ nke agba bụ ihe doro anya ma dị mfe idozi.
Jiri Ngwá Ọrụ Kpoo Ya.
Tụgharịa ya na shelf.
Nọdụ ala na ya.
Wụpụta ebe a na-ere ọkụ.
A igwe okpomọkụ ahụ reflector bụ mkpa mpempe akwụkwọ ma ọ bụ foil etinyere na mgbidi n'azụ, na ebe dị anya site na, ụlọ kpo oku igwe okpomọkụ ahụ. Ebumnuche bụ iji belata ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ n'ime mgbidi ahụ site na igosipụta okpomọkụ na-enwu gbaa site na mgbidi ahụ.
N'ezie, ọ dịghị ihe dị iche nke n'akụkụ nke aluminum foil ị na-eji abụọ akụkụ eme otu ezigbo ọrụ nke isi nri, ifo na ichekwa nri. Ihe dị iche na ọdịdị dị n'etiti dull na-egbu maramara bụ n'ihi na foil usoro mmepụta ihe. A na-etinye mkpuchi na-adịghị mma n'oge nrụpụta na akụkụ duhiere nke foil.
mgbe dọba arịa ụlọ n’ihu of radiators - ọ ga-emebi ngwá ụlọ ma kwụsị ikpo ọkụ na-agagharị n’ime ụlọ. Otu ihe ahụ na-aga maka ákwà mgbochi.
Aluminom foil na-egosipụta okpomọkụ n'ihi na ọ na-egbu maramara ma na ọla. Nke ahụ bụ, ọ na-egosipụta kwes infrared radieshon na eme adighi otutu emit; o nwere obere Emissivity. Convection chọrọ okpomọkụ nduzi n'ime mmiri mmiri. aluminom bụ n'ezie ezigbo onye nduzi nke okpomọkụ.
Ikiri ọkụ na-arị elu site na a igwe okpomọkụ ahụ zutere ikuku oyi na-ada na windo, nke ga-ezukọta na ala nke ụlọ ahụ. Kwesịrị ekwesị dabara ákwà ngebichi kwesịrị adịghị ekpuchi elu nke igwe okpomọkụ ahụ, ma kwesịrị kwụsịtụ n'okpuru oghere windo.
agba ọbara radiators
Otu n'ime ụzọ kachasị mfe mma na arụmọrụ nke usoro kpo oku gị bụ ịgbapụta ọbara radiators. Usoro a gụnyere ịhapụ ikuku ọ bụla tọrọ n'elu igwe okpomọkụ ahụ - site n'ime nke a, mmiri ọkụ nwere ike ijupụta ugbu a dum igwe okpomọkụ ahụ, ya mere, ihe niile ga-ekpo ọkụ.
Ebe ọ bụ na aluminom foil nwere onwunwu n'akụkụ na ihe efu n'akụkụ, ọtụtụ ihe oriri na-esi nri na-ekwu na mgbe ị na-esi nri ndị a na-ekpuchi ma ọ bụ kpuchie na aluminum foil, na -egbu maramara n'akụkụ kwesịrị ịdị ala, na -eche nri ihu, na adịghị ike n'akụkụ elu.
Radiator boosters Ezubere iji mee ka arụmọrụ nke kpo oku dịkwuo elu site na ịgbagharị ikuku ọkụ n'ime ụlọ. Ime ụlọ ahụ na-ekpo ọkụ ngwa ngwa karị, na-eme ka igwe mmiri ọkụ ahụ mechie ngwa ngwa. Ha na-akpaka, na-eji a thermostat na-agba ọsọ naanị mgbe igwe okpomọkụ ahụ na-ekpo ọkụ.
Gịnị kpatara radiators enịm n'okpuru windows? N'ime ụlọ nwere otu glazing, ihe kpatara ya ji arụ ọrụ nke ọma itinye ya igwe okpomọkụ ahụ n'okpuru window bụ n'ihi conduction. Na omenala igwe okpomọkụ ahụ ọtụtụ okpomọkụ a na-esite na igwe okpomọkụ ahụ a na-ekpupụ dị ka ikuku ikuku site na elu nke igwe okpomọkụ ahụ.
A adị n'elu a igwe okpomọkụ ahụ ga- belata mmepụta ya site na ihe dịka 10% n'ihi ụda ikuku na-ebelata. Nke a eme apụtaghị Mbelata na arụmọrụ naanị na ọ ga-adịchaghị irè na kpo oku oghere. Dị ka ọtụtụ radiators buru ibu ma eleghị anya ị gaghị ahụ ihe dị iche belụsọ na ihu igwe kacha dị oyi.
Otu esi enweta ọkụ karịa site na Radiators gị
Gbaa mbọ hụ na agbanyụ ọkụ gị site na ịgbanyụ ọkụ etiti kpo oku gị.
Nweta akwa akwa ma ọ bụ akwa akwa kichin ka ị nweta mmiri mgbe radiators na-agba ọbara.
Gbaa mbọ hụ na valvụ ndị dị na radiator nọ n'ọnọdụ.
Wepu valvụ na-agba ọbara site na iji igodo ọbara ọgbụgba radiator ma ọ bụ screwdriver dị larịị.
Na valvụ meghere (2-3 ntụgharị!)
Radifọdụ radiators na-eme ka ọ dị ntakịrị ọkụ karịa ndị ọzọ. Mgbe nke a mere, ọ na-apụtakarị na usoro ikpo ọkụ gị anaghị edozi. Na ụfọdụ ihe, radiators nwere ike dị iche iche okpomọkụ n'ihi na anya na mmiri na-ekpo ha ọkụ ga-esi si esi mmiri ọkụ ma ọ bụ mgbapụta.
mgbe ọtụtụ kwere na dị iche iche Njirimara na- okpomọkụ pụta mgbe ọbọp na-egbu maramara imecha chere ihu, na-edebe okpomọkụ N'ime njedebe na-egbuke egbuke chere ihu n'ime, ọdịiche dị n'ezie bụ nke a na-apụghị ịkọwapụta na-enweghị ngwá ọrụ. The reflectivity nke na-egbuke egbuke aluminom foil bụ 88% mgbe ọ na-agwụ ike foil dị ihe dịka 80%.
aluminom foil gosipụtara okpomọkụ n'ihi na ọ na-egbu maramara ma na ọla. Nke ahụ bụ, ọ na-egosipụta kwes infrared radieshon na eme adighi otutu emit; o nwere obere Emissivity. Convection chọrọ okpomọkụ conduction n'ime mmiri mmiri. Aluminom bụ ezigbo ezigbo onye nduzi nke okpomọkụ.
Na nut-shell, echefula:
N'ihe gbasara ebe, jide n'aka na ị na-ahapụ ohere zuru oke maka ikpo ọkụ na-ekesa na valves iji tinye ya.
Mgbe ị na-ewepụ radiator, wepụ usoro ahụ.
Idozi radiator na mgbidi.
Bee ọkpọkọ (ọ bụrụ na ọ dị mkpa).
Jikọọ radiator ọhụrụ.
Jiri ụfọdụ ihe mgbochi corrosion.
mylar na-eme ka ọ na-egbuke egbuke ma ọ bụ megharịa ya site n'ịwụsa obere ihe nkiri ígwè n'elu ya. Dị ka aluminom foil, nke na-egosipụta mylar nwere otu gbaa akụkụ na otu akụkụ dull. Ụdị nke a mylar bụ obere permeable na gas ma na-egosipụta ruo 99 pasent nke ìhè, ya mere a na-ejikarị eme ihe na mkpuchi.
Dị ka ihe atụ, a ukwuu polished mpempe aluminom ga-a ezigbo ngosiputa nke radiant okpomọkụ, ma ọ ka nwere ike iduzi okpomọkụ etinyere site na kọntaktị kpọmkwem. Gold bụ kasị mma ihe maka igosipụta radiant okpomọkụ.
Ihe Do & Dochiri nke Ọnọdụ Gị Radiator
Ọ bụrụ na ị nwere a igwe okpomọkụ ahụ n'ime ime ụlọ gị, ọ ga-adị n'okpuru windo ahụ, na mpụga mgbidi. Mere eme, radiators Ejiri ha n'ime akụkụ kachasị oyi nke ụlọ ahụ - ndị mpụga mgbidi - ebe ikuku oyi ga-abanye ma daba n'ala.
4 Azịza. N'ịbụ a onwunwu elu ahụ aluminum mpempe akwụkwọ na-egbukepụ egbukepụ okpomọkụ na belata na ọnwụ okpomọkụ site na radieshon site na ihe ruru 90%. N'ịbụ ndị a na-apụghị imepụta na mpempe akwụkwọ ahụ na-akwụsị mmegharị nke ikuku ọkụ site na gburugburu nke nri ahụ gaa na gburugburu ya site na mmiri iyi convection.
egosipụta on foil
Site na ikpuchi otu akụkụ nke igbe kaadiboodu nke mpio na-egosipụta aluminum foil, na itinye ha n'azụ ọgwụgwọ windo n'akụkụ windo - akụkụ na-egbuke egbuke chere ihu n'èzí - ị nwere ike ịkwụsị ma ọ dịkarịa ala ụfọdụ. okpomọkụ site na ịbanye n'ụlọ, na-akọwa Ready.gov.
I nwekwara ike iji ihe mgbochi, taịl, brik, ụwa na nkume. Ihe atọ na-ekpebi otú mma a ihe onwunwe nọ na-adọrọ ma na-echekwa okpomọkụ. Ezigbo ihe onwunwe bụ: dị oke ma dị arọ, n'ihi ya, ọ nwere ike ịmị ma chekwaa nnukwu ego okpomọkụ (Mkpa ọkụ ihe, dị ka osisi, na-amịkọrọ obere okpomọkụ)
Wayzọ ọzọ na- gosipụta okpomọkụ bụ ịwụnye ihe mgbochi na-egbukepụ egbukepụ n'okpuru ụlọ gị. Ihe mgbochi na-egbuke egbuke bụ naanị mpempe akwụkwọ aluminom na mpempe akwụkwọ. Mgbe etinyere ya n'ụzọ ziri ezi, ihe mgbochi radiant nwere ike belata okpomọkụ enweta site na ụlọ gị site na ihe dịka 25 pasent.
Gịnị kpatara radiators etinye n'okpuru windo? N'ime ụlọ nwere otu glazing, ihe kpatara ya ji arụ ọrụ nke ọma itinye ya radiator n'okpuru na window bụ n'ihi conduction. Na omenala igwe okpomọkụ ahụ ọtụtụ okpomọkụ a na-esite na igwe okpomọkụ ahụ a na-ekpupụ dị ka ikuku ikuku site na elu nke igwe okpomọkụ ahụ.
ebe obibi na ubi, ngwa ulo, ime ụlọ gburugburu ebe obibi mma
Ọnye na-bụ CEO nke Ralph Lauren?
Kedu ka ị ga-esi mee oyi Volvo Penta 5.7 Gi?